Xalayaa waamicha ulfina tokkummaa qabsa’ota Oromoo | Oromia Shall be Free
Xalayaa waamicha ulfina tokkummaa qabsa’ota Oromoo
bilisummaa December 17, 2015	Comments Off on Xalayaa waamicha ulfina tokkummaa qabsa’ota Oromoo
ADDA BILISUMMAA OROMO
ج بهۃ ت حـري ر ورومـى ا OROMO LIBERATION FRONT
Gaafa: Muddee: 14/2015 Lakk:ABO/03/2015
Date: Jan/14/2015 NO:OLF/03/2015
Qabsoo ummata Oromoo galii isaan gahuuf anqinoota mooraa keenya mudatanii jiran keessaa,
inni guddaan tokkummaa dhabiinsa qabsa’otaa ti. Rakkoo kana kan dhalche sababootiin eddu
jiraatanis inni guddaan garuu wal danda’anii ilaa fi ilaameedhan maria’achuuf qophii tahuu
dhabuu dha. kun ammam akka mooraa qabsoo Oromoo miidhee fi qabsa’ota amilee cabse hundi
keenya wal qixa beekna. Ammas aadaa wal irraa dheenfuu fi waliin mari’annee dheebuu
bilisummaa fi abbaa biyyummaa Oromoo dhugoomsuu irraa dhilboofnaan ykn qoollifannaan
ammas diina keenya of irratti goobsuu taati. Wajjin mari’achuu dhabuu irraa kan madde rakkoo
akka salphaatti fala itti argachuu dandeenyu qancarsinee jirra. Adeemsi akkanaa kun kana booda
mooraa Oromoo keessatti seenaa ta’ee afuu qaba. haalli amma keessa jirru isa gara fuunduraa fi
egeree qabsoo sabaaf akka yaannu nu dirqisiisa
haala kaleessa turee fi garaaragummaa keenya yeroo itti faarsaa fi isa babaldhisaa deemnu miti.
Dhiigdii fi lafeen ilmaan oromiyaa yeroo ammaa wayyaaneen dhanga’aa fi caccabaa jiru
jaarmiyaaleen oromoo tokko ta’uuf alduree yeroo waliif tarreessinu miti. Dhugaa dubbachuuf
dargaggoon oromiyaa dachee oromiyaa keessatti falmatti jiran ,yeroo jaarmiyaaleen oromiyaa
garaagarummaa xixiqqoo qabnu furachuu dadhabnee jirrutti qabsoo sabaa ofitti fuudhanii
gaggeessaa jiru. kun barumsa gahaa nuuf ta’uu qaba. Addi Bilisummaa Oromoo yeroo gara garaa
mooraan qabsa’otaa akka jabaatuu waamicha gara garaa taasisaa ture. waamicha ABOn taasisaa
turee fi ilmaan oromiyaa mara irra dedeb’anii dhaammachaa turan fudhachuudhaan
jaarmiyaaleen siyaasaa eddu tokkummaa ummannee jirra. Haata’u malee ammas dhaabbileen
siyaasaa waamicha tokkummaa mooraa qabsa’otaaf owwaachuu didduudhaan ykn lafa irra
arkisuudhaan, haala adeemsa qabsoo harkifachiisu keessaa bahuudhaan akka ammas mooraa
tokkummaa qabsa’otaa wajjin gabbifnu irra deebinee waamcha goona. Akka adda bilisummaa
oromoo ti waamicha tokkummaa kana dhaabbilee siyaasaa maqaa oromoo qaban hundaaf
ergamee ture. warra waamicha ilmaan oromoof owwaatan galateeffachaa ammas dhaabbilee
siyaasaa tokkummaa mooraa qabsa’otaa dadaffiin hojiirra oolchuuf harkifachaa jiran xalayaa
banaa kananaan ammas irra deebinee waamcha oromummaaisiniif goona goona.
dhuma irratti caasaan hawaasaa, jaarsolii fi beektotiin oromoo jaarmiyaa siyaasaa tokkummaaf
abboomamuu irraa qoollifatan irratti dhiibbaa gochuun akka mooraan qabsa’otaa jabeetee
qabsoon bilisummaa fi abbbaan biyyummaa oromiyaa dhugoomuf dhiibbaa akka irratti gootan
gaafanna. Carraadhuma kanaan Addi Bilisummaa Oromoo tokkummaa jaarmiyaalee oromoo
dhugoomsuuf alduree tokko malee kan hojannu ta’uu keenya dhugoomsa. Waamicha ilmaan
oromoof owwaachuudhaan jaarmiyaaleen oromoo afur tokkummaa ummannee jirru ammas irra
deebinee jaarmiyaalee siyaasaa oromoo tokkummaa kana keessatti hin hirmaanneef irra deebinee
Contact Email: abosperson@gmail.com, Tel. 651-808-8774, http://www.oromo-liberationfront.org
Previous Schedule: Oromo Diaspora Solidarity Rallies
Next Galgala yeroo amma kanatti Magaala Dodolaa fi Magaala Aawwadaay keeysatti Sakattaa’iinsi cimaan geggeyfamaa jira